Buningi ububi bokuvusa induku ngomjovo - Ilanga News
Home Impilo Buningi ububi bokuvusa induku ngomjovo
Kufanele usetshenziswe sekuzanywe konke okunye
UDOKOTELA wexwayisa ngomkhuba wokuzijova kwabesilisa
“QINA, qina mfana, indoda kayikhali.” Lawa ngamazwi okujwayele ukukhuliswa ngawo izingane zabafana uma zisekwaluseni. Lapha zisuke ziqhathwa ngabantu abadala kunazo, okuthi uma enye seyehluliwe, ikhala, iduduzwe ngokutshelwa ukuthi uma uyindoda kawutetemi, uyaqina. Yileli gama lokuqinake elenza ukuthi abesilisa bakhule benomqondo wokuthi kumele babe yinsimbi ngazo zonke izikhathi. Nasothandweni bayaye bazibone bangasezinto zalutho uma induku ingasavuki iqine kahle, okwenza abanye ngokududana, basebenzise izinto ngaphandle kokudlula kongoti bezempilo ukuthola kabanzi ngobubi balokho abasuke sebezwe kuthiwa kuphendulana uqanduqandu ekamelweni.
UKHUZA UKUZIJOVA OKUNGAGUNYAZIWE NGODOKOTELA
Yingalesi sizathuke uDkt Thabile Zwane weBlue Clinic eseMaxwell Centre, ngaseCity Hospital eThekwini, obhekene nezigulo zabesilisa, enqume ukuxwayisa abesilisa ngobungozi bokusetshenziswa komjovo ukugcina induku ime mpo. Udokotela uyayikhuza eyokusetshenziswa kwale mijovo yokuvusa induku kwabesilisa abayithenga ngaphandle kokwelulekwa ngokwezempilo, yize iphasisiwe ngokwezempilo ukusiza labo abasuke benezinkinga zokungavukelwa ezisuke zingeke ziselapheka ngenye indlela (erectile dysfunction).
Uthi ziningi izinhlobo zemijovo ezisetshenziswayo, kepha abantu kumele bakuqonde ukuthi isetshenziselwa izizathu ezahlukene.
“Ngenxa yokuthi le mijovo inemiphumela eminingi engemihle (side effects), kayinikwa noma ngubani. Nokho iyasiza ekutheni kuvuke induku ngoba yenza imithambo yenduku ikhululeke kahle, bese igazi ligijima kahle.” Emizuzwini ewu-10 kuya kwe-wu-15 umjovo usuke sewusebenza.
NGOBANI ABAFANELE UKUSEBENZISA LE MIJOVO?
Isetshenziswa kubantu asebalimala imizwa yenduku, mhlawumbe okuke ku-daleke uma ukhishwa i-prostate ngenxa yomdlavuza wa mankwahla. Lokhu imvamisa kwenzeka uma kusetshenziswe uhlelo lokwelapha olubizwa nge-radical prostatectomy ethinta imizwa. Kumuntu osekuzanywe lonke uhlobo lokwelapha ukungavuki kwenduku kepha lungasebenzi. Isetshenziswa kwabanezifo ezithile njengesenhliziyo ngoba sithinta imithambo.
ABESILISA OKUNGAMELE BAWUTHOLE LO MJOVO
• Umuntu owalimala izandla, mhlawumbe washaywa wuhla-ngothi (stroke) okusho ukuthi izandla kazisasebenzi kahle.
• Uma unenkinga yamehlo engasalungiseki ngoba ngeke ukwazi ukuzijova kahle.
• Uma unezifo zokopha ngoba umjovo uzokwenza igazi ligijime ngamandla, wophe into engapheli.
UDkt Zwane uthi ukusetshenziswa kwale mijovo esiza ukuvusa induku kungaba nemiphumela engemihle (complications).
• Ungadala isibazi ngaphakathi okungathi uma uvukelwe sibe buhlungu. Phela induku uma ivuka kayiqondi kodwa ibheka eceleni kube sengathi iphukile. Lokhu kunika owesilisa ubuhlungu kanti nowesifazane asuke ecambalele naye uyalimala ngenxa yokuthi induku iyaeceleni.
• Uvukelwa into engapheli, okungagcina sekuphele ngisho amahora ayisithupha induku imile.Lokhu kudala ubuhlungu kubo bobubiliubulili ngoba owesifazane ugcina isitho sakhe sangasese sesomile, eselimala.
• Kumele osebenzisa umjovo kube wukuthi ungena kuwona ngoba sekuzanywe konke.
• Iqeda ukusondelana (intimacy) kwizithandani ngoba kakube kusaba khona ukudlalisana okwandulela umgijimiswano wasekamelweni.
Owesilisa uma ejova usuke ejovela ukuthi kuqale umsebenzi nje kuphela.
“JOVA NGOBA SEKUZANYWE KONKE, KWEHLULEKA”
Esephetha uthe: “Ngaphambi kokuba uthole umjovo, qinisekisa ukuthi sewuzame konke. Kokunye uthola ukuthi abesilisa abasebancane bazogijimela umjovo kanti banenkinga engalungiseka ngaphandle kwawo. Yingakho ngithi bangenzi izinto ngokutatazela.” Okunye ngalo mjovo kakumele usetshenziswe ngaphezu kwezikhathi ezintathu esontweni. Futhi kumele umuntu ajove ngawo uma sekwedlule amahora awu-24 ekade ewusebenzisile
Previous articleUngqongqoshe ufanise “abebehlukumeza” uzakwabo nemigodoyi
Next articleBABONGE ITHUBA ABAPHILA NOKUKHUBAZEKA BETHOLA IZITIFIKETI